एथ्लेटिक्स संघकाे लापरवाहीले खेलाडीले एसियन च्याम्पियनसिप गुमाउने प्रबल संभावना | Neplays.com
एथ्लेटिक्स संघकाे लापरवाहीले खेलाडीले एसियन च्याम्पियनसिप गुमाउने प्रबल संभावना
By Neplays	 Last updated Mar 10, 2019
कुनैपनि खेलाडीले आफ्नो करियरलाई अगाडी बढाउन खेल क्षेत्र रोजेपछि उसको इच्छा हुन्छ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर पदक दिलाउने । तर खेलाडी एकातिर संघ एकातिर भएपछि त्यस्तो सपना देखेका खेलाडीलाई कुनैपनि हालतमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका आउदैन । नेपालमा आलेम्पिकमा पहिलो सहभागिता देखि निरन्तर उपस्थिती जनाइरहेको एथ्लेटिक्सका खेलाडी संघको इतिहासमा पहिलो पटक एशियन च्याम्पियनसिप खेल्नबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको छ ।
संघको निस्कृयताका कारण कतारको दोहामा हुने एशियन च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडी खेल्न नपाउने संभावना निकै बढि रहेको छ । एशियन च्याम्पियनसिपका लागि खेलाडी दर्ताको मिती सकिएको छ भने संघले सहभागिताका लागि पहल नै गरेको छैन । एक समय दुई वटा एथ्लेटिक्स संघका कारण खेलाडी मर्कामा परेका थिए भने अहिले एउटा संघ हुँदा पनि पदाधिकारीको निस्कृयताले हद काटोको छ । राजीव शाहको अध्यक्षतामा रहेको एथ्लेटिक्स संघ पछिल्लो एक बर्षदेखि नेतृत्व विहिन जस्तै छ ।
कुनैपनि संघको चुनावी साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको पछि त्यसको आयु चार बर्षको हुन्छ । तर एथ्लेटिक्स संघको चुनाव भएको ५ बर्ष पुग्दापनि नयाँ नेतृत्व चुनिएको छैन, भने अबैधानीक रुपमा रहेका अध्यक्ष राजिव शाह लगभग बाहिर जस्तै भएका छन । जसको असर नेपालको एशियन च्याम्पियनसिपमा सहभागितामा परेको छ । आउदो अप्रिलको २१ देखि २४ तारिखमा हुने २३ औं सस्करणको एशियन एथ्लेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले खेल्न नपाउँनु आफैमा पनि लज्जास्पद विषय हो ।
सन् १९९३ मा आधिकारीक रुपमा स्थापना भएको नेपालको एथ्लेटिक्सले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाएपछि सबै एशियन च्याम्यिनसिपमा सहभागिता जनाउँदै आएको थियो । तर यसपटकको संघका कार्यसमितीले प्रतियोगिता हुँदैछ, र खेलाडी पठाउनु पर्नेछ भन्ने भेउ नै पाउन सकेनन् । जसको असर साझै खेलाडीमा परेको छ । एशियन च्याम्पियनसिप आसन्न ओलम्पिकमा सहभागिताको आधार पनि हो । यो विषयमा एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष राजिव शाहलाई बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् ।
एथ्लेटिक्सलाई नजिकबाट बुझेकाहरु यो घटना नेपाली खेलकुदका लागि नै दुःख लाग्दो रहेको बताउछन । च्याम्पियनसिप भन्दा करीव दुई महिना अगाडी नै सहभागिताका लागि फाइनल सुची पठाइसक्नु पर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म केहि टुंगा लागेको छैन । अहिलेको कार्यसमितीले पछिल्लो पटक एथ्लेटिक्स महासंघको कंग्रेसमा समेत भाग लिन गएन भने गत बर्ष संघले कुनैपनि कार्यक्रमको आयोजना गरेन । संघ पुरै कानमा तेल हालेर सुतेको अवस्थामा यतिबेला रहेको छ । यसका साथै सन् २०१७ र १८ मो बार्षिक रिपोर्ट पनि विश्व एथ्लेटिक्स महासंघलाई बुझाएको छैन ।
कुनैपनि संघले हरेक बर्ष आफ्नो क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने हो । संघले बर्षमा खेलाडीलाई ब्यस्त राख्न केहि गतिविधी गर्नुपर्ने हो, तर एथ्लेटिक्स संघले त्यो पनि गरेन । पछिल्लो एक बर्षमा अन्तराष्ट्रिय एथ्लेटिक्स महासंघले आयोजना गर्ने कुनै पनि प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडी खेल्न पाएका छैनन ।
जुन किसिमले नेपाल एथ्लेटिक्स संघ चलिरहेको छ वा उसको हालत छ, त्यो हेर्दा चाँडै नेपालको एथ्लेटिक्स संघ अन्तराष्ट्रिय महासंघको निलम्बनमा नपर्ला भन्ने सकिन्न । त्यसैले अहिलेका पदाधिकारीलाई झक्झक्याउने वा नयाँ कार्यसमिती गठन नगरे एथ्लेटिक्समा फेरी अर्को दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ।
अब के गर्ने हाेला तनाव भाे !
सुनिल र अंशिका मिनि म्याराथनमा पहिलो
खेलाडीपछि क्लवकाे मालिक बन्ने बाटाेमा जेर्राड पिके
सोमपालले भने ‘बुवाको सपना आईपीएल खेलेपछि पुरा हुन्छ’
टी-२० विश्वकपकाे एशिया छनाेटका तयारी सुरु, मलेसियामा २ खेल खेल्ने (फाेटाे फिचर)
नयाँ जीवन पाएका एक हाते फुटबलर भिराेवीकाे जाेस
सन्दीप र सोमपालले भने ‘ग्लोबल टी–२० भन्दा राष्ट्रिय टिम…
नेपालले मलेसियामा २ वटा टी–२० खेल्ने
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई पाँच करोड विनियोजन!
खुसीकाे महिला क्रिकेटमा कीर्तिमान, एक रन नदिएर लिइन ५ विकेट